တရုတ်နိုက်ထရိုဂျင်အရည်စက်နိုက်ထရိုဂျင်အရည်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ၊ သန့်စင်သောနိုက်ထရိုဂျင်စက်ရုံတင့်ကားများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ OR
အရည်နိုက်ထရိုဂျင်အပင် Liqui ...
Cryogenic အမျိုးအစားမြင့်မားသောထိရောက်မှု ...
Air Separation Unit ဆိုသည်မှာအပူချိန်နိမ့်သောနေရာများတွင်အောက်စီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အာဂွန် (အရည်) တို့ကိုအပူချိန်နိမ့်သောနေရာများတွင်အပူပေးသောပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုရည်ညွှန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဆလင်ဒါနှင့်ပြည့်ရန်အောက်စီဂျင်စက်ကိုဆောက်လုပ်သည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်ဒေသခံအခြေအနေများအရသိရသည်စက်ရုံများကိုစိတ်ကြိုက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အကျိုးရှိစွာပေါင်းစပ်ပေးသောစက်မှုဓာတ်ငွေ့ဈေးကွက်တွင်ထင်ရှားသည်။ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်သဖြင့်အပင်များသည်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုမရှိနိုင်သကဲ့သို့ဝေးလံခေါင်သီသောရောဂါရှာဖွေရေးပြtroublနာကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ တိကျစွာဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အောက်စီဂျင်စနစ်များကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ နှစ်နှစ်အတွင်းပင်ဖောက်သည်များဖောက်ပြန်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
အောက်စီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ အာဂွန်နှင့်အခြားလေထုခွဲခြားသည့်ယူရေနီယမ်ထုတ်လုပ်သည့်အခြားရှားပါးဓာတ်ငွေ့များကိုသံမဏိ၊
စက်မှုလုပ်ငန်း၊ သန့်စင်စက်ရုံ၊ ဖန်၊ ရာဘာ၊ အီလက်ထရွန်နစ်၊ ကျန်းမာရေး၊ အစားအစာ၊
1： AIR COMPRESSOR (Rotary Air Compressor)
2： PROCESS SKID: (အစိုဓာတ်ခွဲစက်၊ ရေနံစုပ်စက်၊ ၂ မော်လီကျူးဆန်ခါဘက်ထရီ၊ နိုက်ထရိုဂျင်အအေး၊ ရေစုပ်စက်နှင့်အတူအအေးခံပြီးနောက်အအေးခံစက်၊ ရေခဲအပူပေးစက်၊ ဓာတ်ငွေ့ / ရေလိုင်းများ၊ ဖုန်မှုန့်၊ ဖရွန်ယူနစ်)
3： CRYOGENIC တိုးချဲ့မှု
4： AIR Separation Column - ကျောက်ပြား (ယိုစိမ့်သောသံမဏိတိုင်)
၅： အရည်အောက်ဆီဂျင် pump (ရေနံသံမဏိအရည်အောက်စီဂျင် pump)
6： လျှပ်စစ် panel
7： CYLINDER FILLING MANIFOLD - (၉၉.၇% သန့်စင်ပြီးအရိုးခြောက်သွေ့သောအအေးမှထွက်သောအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ ၁၅၀ ဘားမှအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည်အောက်စီဂျင်ဆလင်ဒါဖြည့်သည့်အောက်စီဂျင်ဆလင်ဒါသို့တိုက်ရိုက်ဖြည့်ပါလိမ့်မည်)
အနိမ့်ဖိအား backflow တိုးချဲ့မှုလုပ်ငန်းစဉ် 2.Full
အာနိသင်တိုးမြှင့် turboexpander နှင့်အတူအနိမ့်ဖိအားဖြစ်စဉ်ကို
ရှေ့သို့ အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ / အရည်အောက်စီဂျင်မီးစက်
ကုန်ပစ္စည်း၏အားသာချက်များ ၁။ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်မှုကြောင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုအတွက် ၂။ အလိုအလျောက်စနစ်။ အဆင့်မြင့်သန့်ရှင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်လာသောဓာတ်ငွေ့များရရှိမှု။ 4. မည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်သိမ်းဆည်းထားရန်အရည်အဆင့်အတွက်ထုတ်ကုန်များ၏ရရှိမှုအားဖြင့်အာမခံ။ ၅ ။
စက်မှုစကေး PSA အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုအောက်ဆီဂျင် ...
သတ်မှတ်ချက်အထွက် (Nm³ / h) ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု (Nm³ / h) လေသန့်ရှင်းရေးစနစ် ORO-551.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အောက်စီဂျင်စက်ရုံနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတင်ပို့သည်။ ဆလင်ဒါဖြည့်တင်းစက်
Cryogenic အလတ်စားအရည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ L ကို ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အားသာချက်များ ၁။ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်မှုကြောင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုအတွက် ၂။ အလိုအလျောက်စနစ်။ အဆင့်မြင့်သန့်ရှင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်လာသောဓာတ်ငွေ့များရရှိမှု။ 4. မည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမဆိုအသုံးပြုရန်အတွက်သိုလှောင်ရန်အရည်အဆင့်တွင်ကုန်ပစ္စည်းရရှိနိုင်မှုအားဖြင့်အာမခံပါသည်။
PSA အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု / Psa နိုက်ထရိုဂျင်စက်ရုံအတွက် ...
သတ်မှတ်ချက်အထွက် (Nm³ / h) ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု (Nm³ / h) လေသန့်ရှင်းရေးစနစ် ORO-551.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 အောက်စီဂျင်သည်လူ့ဘ ၀ ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ မြေကြီး, ဆေးရုံအထူး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင် p ...
စက်မှုဆိုင်ရာ PSA နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ ...
သတ်မှတ်ထားသောထုတ်ကုန် (Nm³ / h) ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု (Nm³ / h) လေသန့်ရှင်းရေးစနစ်တင်သွင်းသူများ caliber ORN-5A50.76 KJ-1 DN25 DN15 ORN-10A 10 1.73 KJ-2 DN25 DN15 ORN-20A 20 3.5 KJ-6 DN40 DN15 ORN-30A 30 ၅.၃ KJ-6 DN40 DN25 ORN-40A 407KJ-10 DN50 DN25 ORN-50A 50 8.6 KJ-10 DN50 DN25 ORN-60A 60 10.4 KJ-12 DN50 DN32 ORN-80A 80 13.7 KJ-20 DN65 DN40 ...
ထုတ်လုပ်သူ High Purity Nitrogen Equipment PS ...
No.88 zhaixi အရှေ့လမ်း Jiangnan မြို့ Hangzhou မြို့တရုတ် Zhejiang
©မူပိုင်ခွင့် - 2019-2020: မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး